George Soros Quotes: Zvakanakisa Zvake 58 Zvinyorwa Uye Sei Akawana Pfuma | Ehupfumi Zvemari
Nyanzvi dzakawanda dzehupfumi dzakapfuma nekuda kwehunyanzvi hwavo hwemari uye hunhu. Pakati pavo pana George Soros, muvambi uye mutungamiri weSoros Fund Management LLC. Pari zvino, kuenzana kwemumwe muridzi wemari kunosvika mabhiriyoni 8,6 emadhora, izvo zvinomupa chinzvimbo pakati pevanhu vakapfuma zana pasi rese, maererano Forbes. Neichi chikonzero, zvinokwanisika kuti zvirevo zvaGeorge Soros zvinogona kubatsira uye kukurudzira. Kana ari mabasa ake erupo, akave akarumbidzwa. Pane kudaro, maitiro ake ezvematongerwo enyika akadzokorora kakawanda kukakavara kukuru.
Mukati memisika yemari yepasirese, Soros ndomumwe wevanyori vanofungidzira, ndosaka akaita hupfumi hwake. Muna 1992 akaita bheji rakakurumbira kwazvo achipokana nepondo yeBritish. Kutenda kufamba kune njodzi uku yakaitwa inopfuura bhiriyoni emadhora pazuva rimwe chete. Mushure mechiitiko ichi akagamuchira zita rekuti "murume akaputsa Bhanga reEngland". Iyo Quantum fund yaakavamba yakanga iine kudzoka kwegore rega kwe33% kweanopfuura makore makumi matatu. Kana iwe uchida kuziva mitsara yakakurumbira yaGeorge Soros uye kuziva kuti akafuma sei, usapotsa ichi chinyorwa.
1 Aya makumi mashanu nemasere mitsara yakanakisa yaGeorge Soros
2 Ko Soros akafuma sei?
Aya makumi mashanu nemasere mitsara yakanakisa yaGeorge Soros
Nyanzvi dzezvehupfumi dzakadai saGeorge Soros vasvika pachinzvimbo chavo kuburikidza nebasa rakawoma rekutsvaga nekudyara kwemakore mazhinji. Munguva iyoyo, munhu wese akaita zvikanganiso kubva kwaakadzidza nekuvandudza maitiro avo. Zvakare, vakaunganidza huchenjeri hwakawanda nekuwedzera pamusoro pemakore. Saka zvinokurudzirwa zvikuru kuti utarise izvo zviri kutaurwa nevatengesi vane mukurumbira. Tevere isu tichaenda kuona runyorwa rwemakumi mashanu neshanu mitsara yakanakisa yaGeorge Soros:
“Ini handisi kuita basa rangu rerudo kubva kune chero mhosva kana kudiwa kwekuumba hukama hwakanaka neruzhinji. Ndinozviita nekuti ndinokwanisa kuzviita, uye ndinotenda mazviri. "
“Kupara mhosva mbanje hakuna kutadzisa mbanje kuva chinhu chinoshandiswa zvakanyanya zvisiri pamutemo muUnited States nedzimwe nyika dzakawanda. ""
“Tinofanira kuziva kuti, sesimba rinotonga pasirese, isu tine basa rakakosha. "Kuwedzera pakuchengetedza zvido zvedu zverudzi, tinofanirwa kutungamira mukuchengetedza zvido zvevanhu."
“Kune kumuka zvakare kwe anti-Semitism muEurope. Iwo marongero eBush manejimendi uye eSharon manejimendi anobatsira kune izvo. "Haisi kunyanya kupokana neSemite, asi zvakare inozviratidza mukupokana neSemite."
"Mune mawonero angu, pane mhinduro ine chekuita nedemokrasi, nekuti hurumende dzevanhu dzinoteerera zvido zvevanhu. "Saka kana vanhu vachizvida, vanogona kugadzira masangano epasi rese kuburikidza nehutongi hwezvido zvevanhu."
“Misika yezvemari kazhinji isingatarisirwe. "Saka unofanirwa kuva nezviitiko zvakasiyana… Pfungwa yekuti unogona kufanotaura zvichaitika inopesana nenzira yangu yekutarisa pamusika."
"Izvo zvakanyanya kuipa mamiriro ezvinhu anova, zvishoma zvinotora kuishandura, iyo inonyanya kukosha."
"Kana tangoona kuti kunzwisisa kusakwana ndiko hunhu hwevanhu, hapana chinonyadzisa mukukanganisa, chete mukusagadzirisa zvikanganiso zvedu."
"Zvichiwedzera, maChinese achava neminda yakawanda yepasirese nekuti vanozoshandura mari yavo yemadhora uye zvisungo zvehurumende yeUS kuita zvinhu chaizvo."
“Ini ndinopa dzidziso yakajairika yekuti misika yemari haina kugadzikana. "Kuti tinotova nemufananidzo wenhema patinofunga nezvemisika inowanzoenzana."
"Kukurukurirana kwakazara uye kwakaringana kwakakosha kudemokrasi."
'Mutemo wave bhizinesi. Utano hwave bhizinesi. Nehurombo, zvematongerwo enyika zvakare rave bhizinesi. "Izvi zvinodzikisira nzanga."
"Kungofanana nedanho rekudzimisa kurambidza doro renyika rakatanga nenyika dzese dzichidzora mitemo yavo yekurambidza, nyika dzoga dzoga dzinofanira kutungamira mukudzima mitemo yekurambidza mbanje."
“Mabhofu emusika wemasheya haamere pasina kwaanoenda. "Ivo vane hwaro hwakasimba muchokwadi, asi chokwadi chinokanganiswa nekufungidzira zvisizvo."
"Kana magandanga ane tsitsi dzevanhu, zvinonyanya kuvaomera kuwana. "Naizvozvo, tinoda vanhu vari kudivi redu, uye izvi zvinotitungamira kuva vatungamiriri vane hunyanzvi venyika, kuratidza kunetseka nematambudziko."
"Kudzora nekuteresa mbanje panguva imwe chete kwaizochengetedza vanobhadhara mutero mabhiriyoni emadhora mukumisikidza nekuvharira mutirongo, uku ichipa mabhiriyoni emadhora mumari yegore."
“Huipi hwakawanda hunowanzoitika munyika nemaune. "Vanhu vazhinji muhurongwa hwemari vakaita zvakaipa zvakawanda vasingazivi."
“Mukati mezana ramakore rechi XNUMX, apo pakanga paine kufunga kwepamutemo uye mutemo usina kukwana, pakanga pane chinetso chimwe pashure pechimwe. Dambudziko rega rega rakaunza shanduko. "Aya ndiwo mabudiro akaita mabhanga epakati."
"Zvakanaka, unoziva, ini ndaive munhu ndisati ndaita bhizimusi."
“Isu tiri nyika ine simba pasi pano. Hapana simba rekunze, hapana sangano remagandanga rinogona kutikunda. "Asi tinogona kubatwa mumugodhi."
"Ndakasarudza United States semusha wangu nekuti ndinokoshesa rusununguko nedemokrasi, rusununguko rwevanhu uye nzanga yakasununguka."
“Vanhu varikutungamira vakanganwa musimboti wekutanga wevanhu vakasununguka, kureva kuti tinogona kunge takanganisa uye kuti panofanirwa kuve nekukurukurirana pachena. "Izvo zvinokwanisika kupikisa marongero pasina kuve munhu asingadi nyika."
Ndiri kuona kusaenzana kwakanyanya munyika. Nhandare isina kuenzana yekutamba, iyo yakatetepa zvakanyanya. Ndinozviona sekusagadzikana. Panguva imwecheteyo, handisi kunyatsoona kuti chii chichagadzirisa. "
“Vanokoshesa misika vanobvuma kuti basa rehurumende muhupfumi rinogara richivhiringidza, risingashande uye kazhinji riine zvirevo zvisina kunaka. "Izvi zvinoita kuti vatende kuti musika mashandiro anogona kugadzirisa matambudziko ese."
“Hwaro hwangu hwangu hunotsigira vanhu munyika vane hanya nesangano rakasununguka. Iri ibasa rako randiri kutsigira. Ipapo handisi ini ndiri kuzviita. "
"Misika inogara iri mumamiriro ekusava nechokwadi uye nekubuda, uye mari inogadzirwa nekubvisa pachena uye kubheja pane zvisingatarisirwi."
“Chokwadi ndechekuti misika yezvemari iri kuzvidzikamisa; "Dzimwe nguva vanowanzoita kusaenzana, kwete kuenzana."
"Kukwikwidza kusingadzorwi kunogona kutungamira vanhu kuzviito zvavaizodemba."
Ndiani anobatsira zvakanyanya kubva mukuchengetedza mbanje zvisiri pamutemo? "Vanonyanya kubatsirwa nemasangano makuru ematsotsi muMexico nekune dzimwe nzvimbo vanowana mabhiriyoni emadhora gore rega kubva mukutengesa zvisiri pamutemo, uye ndiani angakurumidza kurasikirwa nemakwikwi avo mbanje chiri chigadzirwa chiri pamutemo."
'Misika yakagadzirirwa kuti vanhu vatore zvido zvavo uye kutsvaga purofiti. Icho chaicho chinhu chikuru chakagadzirwa uye ini handimbofa ndakazvidza kukosha kwayo. Asi izvo hazvina kugadzirirwa kusangana nezvinodiwa munharaunda. "
"Kana zvasvika pamhedzisiro yemagariro, ivo vane vanhu vakasiyana siyana vanoita nenzira dzakasiyana, zvakaoma kwazvo kuti vawane muyero wakakodzera webudiriro. "Saka ibasa rakaoma."
"Pandakaita mari yakawanda kupfuura yandaida ini nemhuri yangu, ndakagadzira hwaro hwekusimudzira hunhu nemisimboti yenzanga yakasununguka uye yakavhurika."
"Sangano rakasununguka inzanga inobvumidza mitezo yayo mukana wakakura kwazvo werusununguko mukutevera zvido zvavo zvinoenderana nezvinodiwa nevamwe."
“Ndakanga ndisingambozivi zita remurume uyu… Ndiye akandigadzira. "Aindida nekuda kwezvematongerwo enyika, saka ndiri munhu wepfungwa dzake."
"Saka ndinofunga zvinoda kuitika ndezvekuti anoda kubviswa pamasimba."
"Handifunge kuti uchaona Fed ichisvetukira mumitero yemitero."
"Ini ndinotarisira kuve nekuderera kukuru mukushandiswa kwevatengi kweUS na07, uye handioni chiri kutora nzvimbo, nekuti chakakosha seinjini yehupfumi hwenyika."
"Ndinopa mazana mashanu emamiriyoni pagore kutenderera pasirese kusimudzira Open Society."
"Uri kunyatso kuzviitira zvakanaka nekuti urikugara musimba, uye urikuzviisa panzvimbo yekuti ununure shamwari dzako dziri mukutambudzika kwemari, kusanganisira nemwanakomana wako, nezvimwe."
"Ndinofunga kuti pfungwa yese yekumesa dambudziko remushonga ipfungwa dzenhema,… Unogona kushayisa simba kushandiswa kwemishonga, unogona kurambidza kushandiswa kwemishonga, unogona kurapa vanhu vakapindwa muropa nezvinodhaka, asi haukwanise kuzvipedza." . "Ukangobvuma pfungwa iyi, unokwanisa kutanga kuita zvine hungwaru dambudziko iri."
"Inopfuura hafu yezviitiko zveAIDS zvinosanganisira vana zvine chekuita netsono dzine tsvina."
"Kana matema ane fungidziro isiriyo, sezvavanogara vachiita, saka haigone kuchengetedzwa zvachose."
Ini ndinofunga ndakarasa kubata kwangu imwe nguva yapfuura. Ini ndakaita semutambi wetsiva akare asingafanire kupinda mumhete. "
'Kusanzwisisika kwaro kusiri pamutemo kwave kuri pachena kwandiri kwenguva. Ndakadzidza nezvembanje kubva kuvana vangu ndikaziva kuti yaive nani zvikuru kupfuura Scotch, uye ini ndaida Scotch. Ipapo ndakaenda kuna chiremba wangu ndokuti: Ndiri kufara. "Hausi kunwa zvakanyanya, uri nani pakusvuta mbanje pane kunwa."
"Takasvika pakuziva kuti hodhi huru yakaita seQuantum Fund haisisiri nzira yakanakisa yekuchengeta mari….
"Une mukana wekudonha kwese-kwese kana iwe ukadzikira mune zvehupfumi pakati, kunyangwe kudzvinyirira kwekuwedzera kwezvinhu kuri kuwedzera… Tave padhuze nazvo, hongu."
"Asi nguva pfupi yadarika takaona kuti misika yezvemari dzimwe nguva inofamba kunge bhora rekuparadza, zvichidonhedza hupfumi hwese mushure meumwe."
"Sezvo kuwedzera kweimba kuri kutonhora, pachave nekushomeka kuri kudiwa (kukanganisa) hupfumi hwepasi rose."
"Chinhu chakatyoka chaizvo mukuvakwa kwemari yepasi rose. Isu tave mumwedzi wemakumi maviri wedambudziko remari. "Zvisinei, dambudziko iri rakanga rava kutanga, ndiro dambudziko raitarisirwa kwazvo munhoroondo yezvino."
“Kusvika pamari idzi, nyika dzinofarira dzaigona kuwana misika yemari yepasi rose nemitero yakasarudzika. Kupfuura izvi, vakweretesi vanofanirwa kungwarira. "
Zvino, ini handisati ndashanda iwo ruzivo, nekuti ini handifunge kuti ndeangu ekuti ndigadzirise ruzivo. Ndezvavo kuti vagadzirise ruzivo. "
"Pane dambudziko randinofunga ririkubika, uye ndiko kuperera kwekuwedzera kweimba muAmerica uye kugona kwemhuri kushandisa mari inopfuura yavanowana nekuti kukosha kwemba yavo kuri kuwedzera."
"Iyi asymmetry pakurapwa kwevanokweretesa nevakwereta ndiyo honzeri huru yekusagadzikana muhurongwa hwepasi rose hwemabhizimusi uye inoda kugadziriswa."
"Chinangwa ndechekupa manejimendi akanakisa emhuri yangu uye nhepfenyuro midziyo inogona kuve inokwezva kune vamwe vatengesi vane zvinangwa zvakafanana, uye nekumisikidza chimiro chinogara kupfuura hupenyu hwangu."
"Ini ndinofunga zvinoda kuburitswa kwemari uye pamwe kunyange hombe package kuunza kugadzikana ... Zvese zvingadai zvakaitwa zvisirizvo zvakaitwa zvisizvo."
"Ndiri kunetsekana kwazvo nezveyero iri pakati pekupa uye kudiwa, iyo yakaoma kwazvo."
“Ndinoda kubatsira vanhu vanokuvara. "Uye kana ndikadaro, ndinonzwa sekunge mari yangu yashandiswa zvakanaka."
'MaGerman anowanzo kukanganwa izvozvi kuti euro yaive yakanyanya kugadzirwa neFranco-chiGerman. Hapana nyika yakabatsirwa zvakanyanya kubva kueuro kupfuura Germany, zvese mune zvematongerwo enyika nezvehupfumi. Naizvozvo, izvo zvaitika semhedzisiro yekuunzwa kweeuroy inonyanya kuita basa reGerman. '
Ko Soros akafuma sei?
Zvino zvataverenga mitsara yaGeorge Soros, isu tave kuzotsanangura zvishoma nezve ake trajectory kuti uvanzwisise zvirinani. Mushure mekuremara kwehudiki nehudiki panguva yeHondo Yenyika II, maakabatsira baba vake kunyepera magwaro evaanoshanda navo kuHungary panguva yeHolocaust, George Soros akatanga zvidzidzo zvake muna 1947 kuLondon School of Economics. Ikoko, chipangamazano wake uye muzivi Karl Popper akaisa maari izwi rekuti 'nzanga yakasununguka', iyo yaimiririra zvinopesana nevadzvanyiriri kuti iye nemhuri yake vapona. Mukuwedzera, izwi iri rinotaurwa mune mamwe mitsara yaGeorge Soros. Makore mana apedza degree rake, wezvehupfumi weHungary akawana basa mune zvemari kuBhangi yeLondon.
Muna 1956, George Soros akawana basa rekugadzirisa mutyairi kuFM Mayer muNew York, kwaakatamira kuUnited States. Mushure memabasa akati wandei semuongorori uye mushandi mumakambani akasiyana eWall Street, ivo vaHungary vakakwanisa kubata mari yavo yekutanga kumahombekombe, Chekutanga Eagle Fund, muna Arnold uye S. Bleichroeder. Nekuda kwekubudirira kwake akakwanisa kuumba yechipiri homwe yaakatumidza kuti Double Egale Fund.
Makore gare gare, muna 1973, Soros naJim Rogers, mubatsiri wake, akaumba kambani Soros Fund Management. Makore matanhatu gare gare uye nekuumbwa kwehedge fund, yakatumidzwa zita rekuti iyo Quantum Fund. Kubva pakavambwa homwe iyi, kudzoka kwake kwaive 3,365% uye akawana kudzoka kwe47% panguva yePS500 index.
Pamwero waienda nekambani nyowani iyi, muna 1981 kukura kwayo kwaienderana nemamiriyoni mazana matatu negumi nemasere emadhora. Zvichakadaro, kukosha kwaGeorge Soros kwaifungidzirwa kudarika madhora zana emabhiriyoni. Gore rimwe chetero, riini Institutional Investor akaziva maHungary se "maneja mukuru kwazvo munyika", Jim Roger akasiya kambani. Zvakare iri mhando remazita rinoita kuti zvive zvakanaka kuverenga mitsara yaGeorge Soros. Makore mana gare gare, muna 1985, iyo Quantum Fund yakaunza kudzoka kwe122% uye muna 1986 yakapfuura $ 1,5 bhiriyoni.
Muna 1989, Soros akafunga kutora Stanely Druckenmiller kuti amhanye iyo Quantum Fund. Tichitarisa kumberi kuna1993, yakwanisa kuburitsa kudzoka kwegore rega kwe40%. Zvisinei, chakasimudzira hupfumi hwaGeorge Soros yaive mashandiro aakaita achipesana nepondo yeBritish muna 1992. Sangano iri rakamuwanisa bhiriyoni rimwe remadhora, kunze kwekuwana purofiti yaakawana kubva kune kumwe kushanda pamusika wemasheya weTokyo, iyo lira yeItaly uye Korona yeSweden. Maererano nekufungidzira, George Soros aive awana mugore rimwe chetero madhora mazana matanhatu nemakumi mashanu emadhora. Shure kwaizvozvo, akatanga kusiyanisa hupfumi hwake nekugadzira mari nyowani yeQuantum.
Sezvauri kuona, trajectory yemupfumi uyu yave yakareba uye yakaoma. Nekudaro, nekutsungirira uye nemoyo murefu akakwanisa kuve mumwe wevanhu zana vakapfuma pasi rese. Ndinovimba George Soros makotesheni akakurudzira uye akakukurudzira iwe kuti utevere yako wega rwendo rwemari. Kuziva iyo biography yevakakurumbira vanoita mari avo vakawana rusununguko rwemari ndiyo imwe yesarudzo dzakanakisisa dzekuzvikurudzira isu kuti isu tinogona kuzviwana zvakare. Zvakare, nerubatsiro rwemazano ako uye fungidziro tinazvo zviri nyore zvishoma.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » General hupfumi » George Soros Quotes
Zvikumbiro kuti uwane mari
Tsanangudzo ye hyperinflation